जलवायु परिवर्तन : विशेषज्ञहरु भन्छन्, भविष्यका पिढीहरुको लागि ठुलो खतरा ! - Lokpath Lokpath
२०७६, १ मंसिर आईतवार १६:०६
जलवायु परिवर्तन : विशेषज्ञहरु भन्छन्, भविष्यका पिढीहरुको लागि ठुलो खतरा !
प्रकाशित मिति : २०७६, १ मंसिर आईतवार १६:०६
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन विश्व भरी बच्चाहरुको स्वास्थ्यको लागि ठुलो खतरा बनेको छ । यदि विश्वको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राखिएन भने यो भावी आउने भविष्यका पिढिका रुपमा रहेका बालवालिकाहरु ठूलो असर पर्ने एक नयाँ अनुसन्धानले दिएको छ ।
भारतको राजधानी दिल्लीका बाल रोग विशेज्ञषका अनुसार बच्चाहरु गोरो एंव गुलाबी नभइ कालो रङ्गका हुन थालेका छन् । लासेट पत्रिकामा स्वास्थ्य एंव जलवायु परिवर्तनमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार गर्मीका कारण पृथ्वीको प्रवाभ विश्व भरिका बच्चामा पहिले देखि देखिएको थियो । यदि पृथ्वीको तापमान २ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्न सकिएन भने भविष्यका यी पिढीहरुमा असर हुने देखिएको छ ।
द लासेट काउटडाउनका सह-अध्यक्ष एथोनी काँस्टेलोका अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा हाम्रा सबै मानिस एंव बच्चाहरु मृत्युको संख्या कमी भएको देखिएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका समस्याबाट तत्काल समधान गर्न सकिएन भने यसको परिणाम उल्टो हुनेछ ।”
यो अनुसन्धान विश्वको ३५ संस्थानहरुले संकलन गरेका थिए । जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र वल्ड बैङ्क समेत सहभागिता रहेको थियो । यस अनुसन्धानबाट विश्वमा भएको जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विनाश र स्वास्थ्य बिच रहेको सम्बन्ध देखाउने छ । तापमान वृद्धिले इधनको भोक,कुपोषण,संक्रामक रोगको स्तर उच्च हुनेछ । छिटो-छिटो परिर्वतन मौसमको साथ वायु प्रदूषण मानिसहरुको लागि मृत्युहुने जोखिम उच्च हुने गर्दछ । जस्तो धूम्रपानले मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असर भन्दा उच्च हुनेछ ।
खाद्य पदार्थसम्म पहुच कठिन
आजका दिनमा जन्मिएका बच्चा आफ्नो जीवनको सुरुवातको पहिलो दिन जलवायु परिवर्तनको प्रभावको संपर्कमा आएका छन्। तापमान वृद्धिका साथ वाढी पहिरोको प्रभावबाट जोखिममा रहेका छन्। लासेटको रिपोर्टका अनुसार भारतमा पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरकार बच्चाहररुको दुर्इ तिहार्इ मृत्युको कारण कुपोषण जिम्मेदार रहेको छ । कुपोषणको कारण खाद्य पदार्थमा अभाव हुनुको साथै खाद्य पदार्थ अस्वच्छता नभएको कारण पनि रहेको छ ।
खाद्यवस्तु महगो हुनुको कारण अधिकांश उपभोक्ता अस्वच्छ खाद्य पदार्थ खरिद बाध्य रहेका छन्। पब्लिक हेल्थ फाउडेशन अफ इडिया सेन्टर फार एनवायरमेटल हेल्थका उप निर्देशक पूर्णसमा प्रभाकरणका अनुसार ” यहाँ कुपोषणले गर्दा कम तौल र मोटोपनको संख्यामा वृद्धि ” भएको छ ।
पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चामा तापमान,संक्रामक रोग, वर्षाहुने मौसममा परिवर्तन र आर्द्रताको कारण बैक्टीरिया उच्च वृद्धि फैलिदै गएको छ । मौसम परिवर्तनका कारण डेंगू, मलेरिया एंव हैजा जस्तो बिरामीको सख्यामा उच्च वृद्धि हुनुमा मद्दत पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनसुार २०१७ मा मलेरियाका कारण चार लाख पैतीस हजार मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो ।
गर्मी र जाडोको उच्च जोखिम
आज जन्महुने शिशुहरुको स्वास्थ्यमा धेरै परिवर्तनका आएको छ । मौसम परिवर्तनले गर्मीको समयमा अत्याधिक गर्मी हुने जंगलहरुमा आगलागी संख्यामा वृद्धी भएको छ ।
२००१ देखि अहिले सम्म १९६ मे देखि १५२ देशहरुमा जगलका लागेको आगोको संपर्कमा आउने मानिसहरुको संख्याको अनुमान गरिएको छ । ६५ वर्ष यताकै अत्याधिक गर्मी भएको छ बताइएको थियो । गर्मीमा तापमानको असर थकान,लू पहिलेको भन्दा धेरै दिएको छ । यसले ह्रदय रोग एंव स्वास सम्बन्धी रोगहरु लाग्न नसक्ने छ ।
तत्काल प्रभाव कम गर्न कोइलाको प्रयोगमा बन्द
स्वास्थ्य प्रभाव अनिच्छुक निति निमार्णको लागि महत्वपूर्ण मोड सावित हुन सक्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार आज जन्म भएको बच्चाको पिडा कम गर्नका लागि पहिलो कदम संसारलाई डिकार्बोनाइज्ड गर्न पर्ने हुन्छ । यो भने सम्भव रहेको छ । तर यसका लागि कठोर नितिको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि राजनितिक इच्छाशक्तिको आश्यकता हुनुपर्छ ।